U Diyaargarowga Munaasabadda Ciidda Ee Suuqyada Magaalada Kismaayo - Jazeera FM
U Diyaargarowga Munaasabadda Ciidda Ee Suuqyada Magaalada Kismaayo
June 21, 2017 June 22, 2017 admin featured
Iyada oo maalmo qura ay naga xigaan maalinta ciidul fitriga ayaa magaalada Kismaayo waxaa laga dareemayaa u diyaar garoow ku aadan maalintaasi.
Kumanaan dadyoow ah oo usoo dukaameysi takay suuqyada kala duwan ee dharka iyo kabaha lagu iibiyo ay buux-dhaafiyeen magaalada.
Caruur, haween iyo qoysas wada socda ayaa u badan dadka kala duwan ee lagu arkaya suuqyada.
Qaar kamid ah dadweynaha oo innooga warbixiyay sida ay u dukaameysanayaan iyo farqiqa u dhexeeya u diyaargarowga ciiddan iyo ciidahii hore.
“Aad ayaan u faraxsanahay waxaan ku guda-jirnaa u diyaar garowga ciidda, waaad u jeedda suuqa waxa dad ah ee yaacaya. Dhammaantood waa ay wada faraxsanyihiin, waxay iibsanayaan dharkii ciidda. waad u jeedda sidoo caruur iyo waalidkooda oo la socda. Suuqii waa ciriir oo dadkii ayaa ka batay.
“Sidoo kale waxaa xusid mudan in aan la hilmaamin dadka qaxootiga ah ee kasoo laabtay qaxootiga dalka Kenya iyo weliba barakayaasha kale ee gudaha ku barakacay” ayuu yiri mid kamid dhalinyarada magaalada Kismaayo.
Saleebaan Xasan Maxamed oo kamid ah ganacsatada dharka iyo kabaha ku iibiya suuqa weyn ee Kismaayo “Maanta waa maalintii ugu mashquulka badneyd ayaan dhihi karnaa iyadoo maalmaha ciidda loo diyaar garoobayay mashquulkana aad ayuu u badan yahay dharka caruurta iyo kuwa dharka dadka waaweyn kulli waa la wada iibsadaa. Hadane waxaa aad loo iibsanayaa kuwa dadka waaweynla”
← Dhaxal sugihii Boqortooyada Sacuudiga oo La Eryey
Madaxweyne Cosoble oo Xilkii Ka Qaaday Wasiirka Maaliyadda & Muran Ka Taagan Arrintaas →